December 31, 2016 – Waxaa soo baxaya warar sheegaya in Sarkaal ka tirsan ciidamada Ilaalada ee xarunta Madaxtooyada goor dhow lagu dhex dilay Xarunta Madaxtooyada, iyadoo laba askari oo kalana goobtaasi lagu dhaawacay.
Askari ka tirsan Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada ayaa waxaa la soo sheegayaa inuu rasaas ku furay sarkaal taliye ku xigeen ka ahaa ciidamada Ilaalada Madaxtooyada, oo naaneystiisa lagu soo koobay (Qoorgaab).
Askarigii weerarka gaystay ayaa sidoo kale dhaawacay laba askari oo kale, oo xilligii Sarkaalkaasi la dilayay la joogtay, Rasaasta lagu dilay Sarkaalkaasi ayaa laga maqlay qaybaha kala duwan ee Madaxtooyada.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo, ayaa sheegaya in goobtaasi uu ka baxsaday askarigii weerarka dilka ah gaystay.
Ciidamada Ilaalada Maddaxtooyada oo ay ku jiraan kuwa Ciidamada Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ayaa heegan buuxa la galiyay waxa ayna isku gadaameen xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya.
Ciidamada kale ayaa la soo sheegayaa inay baadi-goob xoogan ugu jiraan askarigii dilka gaystay, oo ilaa iyo hadda aan la’aqoon goobta uu u baxsaday.
December 31, 2016 tuugahaladilo2015
Maxay Yihiin Caqabadaha Horyaala Xukuumadda Cusub ee Madaxweyne Farmaajo (Akhriso) March 1, 2017
DAAWO: Sawirradii Maanta Laga soo Qaaday Munaasabadii Farmaajo kula Wareegay Xarunta Madaxtooyada (SAWIRRO) February 16, 2017